Leaddị Nduzi Anwụla? | Martech Zone
Azịza dị mkpirikpi? Yep.
Ma ọ dịkarịa ala n'echiche ọdịnala, na site na "ọdịnala" anyị pụtara na ị ga-achọ ozi ndị ọbịa tupu ị nye uru, ma ọ bụ iji ọdịnaya na-adịghị mma, ihe nkwado.
Ka anyị kwado ụgbọ ala ahụ maka ụfọdụ ndabere:
N'ime ọrụ anyị na-enyere ndị ahịa aka ịbawanye ntugharị n'ịntanetị, anyị achọpụtala nnabata dị ịrịba ama na-agbanwe agbanwe na ndị ọbịa weebụ na-ejupụta ụdị ndu ọdịnala. Enwere ezigbo ihe kpatara ya.
Omume onye na-azụ ahịa na-agbanwe, nke kachasị n'ihi na teknụzụ, ozi na njikọta ha nwere na-agbanwe ma na-agbanwegharị omume ha.
N'ihi ya, ndị ahịa gị enwekwuola ihe ọmụma, nghọta, na-achọ ihe, ma na-adọpụ uche. Na mkpokọta, ha dị enweghị ọdịnaya na ọdịnaya niile nke ahụ na - efukarị akara ahụ n’ịkpọọ mkpa ha, ọdịmma ha, ma ọ bụ ebe ha nọ na njem ịzụta.
Gated ọdịnaya nke na-arụ ọrụ nke ọma n'oge na-adịbeghị anya (anyị na-ele gị anya, akwụkwọ ọcha na akwụkwọ ntanetị) bụ ihe mkpali dị egwu iji nweta ozi kọntaktị mmadụ.
Ọ bụrụ na ị na-eche nke gá »‹ website dá »‹ ka dijitalụ ahịa rep (dika ikwesiri), ihe di iche nke etinyere na uzo di iche iche bu onye na-ere ahia nke na-akparita mkparita uka a, na-ada ka ihe ndekọ gbajiri agbaji, ma na-anapụta otu ụda olu-adighi ntị na olile anya obula nke na-agabiga uzo ya. Kwuo ihe dị iche na nke a ịre ahịa na-ajụ ajụjụ, na-ege ntị ma na-aza. Onye echetara echeghị dịka onye na-ere ahịa na-ere ere, kama dịka onye ndụmọdụ a tụkwasịrị obi na ezigbo onye mkparịta ụka. Nke ahụ bụ ihe mmekọrịta ọdịnaya nwere ike ịnapụta.
Ndi mmekọrịta na-arụ ọrụ n'ezie?
Tụlee ihe ndị a:
Mmekọrịta mmekọrịta na-eme ka 94% gbanwee ọzọ Source
Mmekọrịta na-emekọrịta mmekọrịta na-ewepụta 300% mmekọrịta mmekọrịta dị elu Source
Mkparịta ụka na-emekọrịta mmekọrịta na-ewepụta 60% elu njigide nke ozi. Source
Mmekọrịta mmekọrịta na-ewepụta 500% karịa data anakọtara. Source
Ihe abụọ mere anyị ji achọ imesi ike:
Ozi nke ahaziri maka ọdịmma m yana ebe m nọ na usoro ịzụrụ ihe ga-ada ụda oge niile, “njide-niile” ọdịnaya echepụtara iji mee mmadụ niile obi ụtọ. (Anyị niile maara otu esi achọ ime ihe ga-atọ onye ọ bụla ụtọ. Ọ dịghị mma.)
Neuroscientists gwara anyị anyị “ụbụrụ reptilian”(Aha otutu maka akwara ụbụrụ na-agbagharị omume amaghị ihe na nke ikpeazụ na mkpebi) dị oke anya, na ọdịnaya enweghị ihe mmegharị anya anaghị adị irè.
Obere obere akụkọ iji kwado okwu ikpeazụ a: Anyị nwere ndị ahịa nwalere ihe omuma gbasara akwụkwọ ọcha, onye ọ bụla nọ ọdụ n'azụ ụzọ. Akwụkwọ ọcha ahụ nwetara ntụgharị efu, ebe infographic nwetara 100% nke ntinye. Chọrọ ka ụbụrụ ụbụrụ ahụ mee ihe? Mee ka ọdịnaya gị dị egwu, n'ihi Pete.
Okwu ikpe maka ịkwanye ụzọ ntụgharị oge ochie abụghị igbu ụdị kpamkpam, kama kpoo ndị ahịa ihu na ahụmịhe mmekọrịta na-ewulite ntụkwasị obi ma nyefee uru tupu ị jụọ ha maka nnukwu nkwa dị ka ịkekọrịta ozi ịkpọtụrụ ha. (Dịka ị ga-akpa agwa ụbọchị ma ọ bụrụ na ị nwere olile anya inweta ụbọchị nke abụọ.)
Kedu ụdị ọdịnaya mmekọrịta nwere ike ime nke ahụ?
Ihe Nlereanya nke ọdịnaya mmekọrịta -agụnye:
Oge akara aka - Gwa atụmanya iji nwalee atụmatụ ma ọ bụ uru site na ịtọ oge
Nyocha - Bugharịa gaa na mkpa nke onwe gị, ma nyefee ndụmọdụ ndị na-enye aka
Ndị na-agụ akwụkwọ - Nyere ndị na-azụ nlele uru
ikori - 1: 1, ezigbo oge enyemaka dịka onye ahịa na-enyocha izu
Omenala athzọ / Nkwado - Ngwaọrụ omenala, nkwanye ma ọ bụ nkwalite dabere na mmasị ndị na-azụ ahịa, akụkọ ihe mere eme, ma ọ bụ ịzụrụ ndị ọgbọ
Nyochaa ozugbo - Wepu ịzụ ihe mgbochi site na ịkọwapụta ma ha nwere ike ịzụta ugbu a
Imeri ozugbo - Gwakọta ihe mkpali na mmasi
Infographics mmekọrịta - Infographics nwere mmekorita ihe dika mmeghari na ihe a choro dika ihe omuma ma obu vidiyo
Lezienụ oke na tweet / social share - Nye ndị ọbịa ụgwọ ọrụ maka ohere mgbe ha kekọtara ọdịnaya gị na netwọkụ mmekọrịta ha
Ndị ọkà mmụta - Ka ndị ọbịa nwalee ma gosipụta ihe ọmụma ha
Akụkọ Microsites - Microsites dị n'ịntanetị nke na-ejegharị onye ọbịa site na ibe na vidiyo site na ntụgharị
Trivia - Mejuo ọchịchọ ịmata ha ma gosi ọtụtụ ihe ha mara
Video - Gosi vs. gwa
Mgbe ị na-eme atụmatụ ọdịnaya mmekọrịta gị, ọ bara uru iburu n'uche ndị ọkwọ ụgbọala na ihe nleta nke ndị ọbịa na mmanụ oriri. N'okpuru ebe anyị depụtara ụfọdụ, biiri n'aka ndị enyi anyị Dị Ndu Nwụrụ Anwụ:
Ofhụ onwe anyị n'anya
Ajị ajị na ihe nke a ga-adị ka omume? Nke a bụ ezigbo ntụziaka, nke ị nwere ike "ịkwụ ụgwọ na tweet" yabụ ị ga-enweta ụtọ nke ụzọ mmekọrịta-gen ụzọ.
Lelee Nduzi Mmekọrịta
Tupu anyị ahapụ ụzọ, Achọrọ m ịnakwere ma nye ndị ahịa anyị nnukwu ụlọ ise mmekọrịta mmekọ mmekọ—Muhammad Yasin na Felicia Savage na PERQ. Ndị otu ha ewepụtala ngwanrọ dị egwu, ngwanrọ mmekọrịta iji gbanwee weebụsaịtị gị ka ọ bụrụ onye na-ere ahịa dijitalụ, nke ị kwesịrị lelee na ngosi, ala.
Rịọ a Ngosipụta nke mmekọrịta Afọ Software
Kedu ụdị ọdịnaya mmekọrịta, ọ bụrụ na ọ dị, ị nweela? Kedu ihe bụ echiche gị ruo ugbu a? Kekọrịta n'okpuru ma ka anyị nyere ibe anyị aka.
ngosi: PERQ bụ onye ahịa nke anyi gị n'ụlọnga.
Tags: content Marketingọdịnaya mmekọrịtangwanrọ mmekọrịtaụdị ọdịnaya mmekọrịtaahụmahụ mmekọrịtaformsdị nduụdị ndu nwuru anwuPERQ